Facebook 196.0.0.0.29 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 196.0.0.0.29 လြန္ခဲ့ေသာ5မိနစ္က
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတက် Keeping ယခင်ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူသည်။ ဝေမျှမယ်နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ဓာတ်ပုံများ, မိတ်ဆွေများနှင့်စာမျက်နှာများနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံ, သင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အသိုင်းအဝိုင်းချိတ်ဆက်နေဖို့။
အဆိုပါ Facebook မှာ app ကိုအပေါ်အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်:
* သတ်မှတ်မည် status ကိုမွမ်းမံမှုများ & သင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာပေါ်မယ့်အရာကိုထပ်ဆင့်လွှင်ကူညီရန် Facebook ကိုရုပ်ပြောင်ကိုသုံးပါ
* ဝေမျှမယ်ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးအမှတ်တရများ။
နှင့်တူသောသူငယ်ချင်းများကိုသင့်ရဲ့ပို့စ်များအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်သည့်အခါ * အကြောင်းကြားစာများ Get
* ဒေသခံလူမှုရေးဖြစ်ရပ်များကိုရှာပါ, နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူတက်ဖြည့်ဆည်းရန်အစီအစဉ်များလုပ်
သင့်ဖေ့ဘုတ်ခ်သူငယ်ချင်းများမဆိုနှင့်အတူ * Play ကိုဂိမ်း
အယ်လ်ဘမ်အတွက်သူတို့ကိုချွေတာခြင်းဖြင့် * Backup ကိုဓာတ်ပုံများ
* သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းရဖို့သင့်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအနုပညာရှင်များ, ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ကုမ္ပဏီများကလိုက်နာပါ
* ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, စစ်ဆင်ရေးနာရီ, နှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ဖို့ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမျှော်
* Buy နှင့် Facebook Marketplace တွင်ဒေသအလိုက်ရောင်းချ
သွားလာရင်း * စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုများ
Facebook အသင်တို့ကိုလည်းနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလက်ရှိဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူတက်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။ သူတို့၏ Newsfeeds အတိုင်းလိုက်နာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အဖြစ်အပျက်ပေါ်တွင်သင်ဘယ်မှာနေပါစေချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားခံရဖို့သင်အကြိုက်ဆုံးနာမည်ကြီးတွေ, အမှတ်တံဆိပ်, သတင်းရင်းမြစ်များ, အနုပညာရှင်, ဒါမှမဟုတ်အားကစားအသင်းများကိုမှ Subscribe!
Facebook အများ၏အရေးအပါဆုံး desktop ပေါ်မှာ features တွေလိုမျိုး, ဘာလဲဆိုတော့အချိန်ပေါ်ရေးသားခြင်းဓာတ်ပုံများ like နှိပ်, လူတို့အဘို့ browsing, သင်၏ပရိုဖိုင်းနှင့်အုပ်စုများကိုတည်းဖြတ်သည်အတိုင်း, app ကိုအပေါ်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
အခုဆိုရင်သင်တစ်ဦး beta ကို tester ဖြစ်လာနေဖြင့် Android အတွက် Facebook ကရဲ့နောက်ဗားရှင်းစောစော access ကိုရနိုင်သည်။ , sign up ကိုတုံ့ပြန်ချက်ပေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီစင်တာပရိုဂရမ်ကိုစွန့်ခွာဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ: http://on.fb.me/133NwuP
ပြဿနာများ app ကိုဒေါင်းလုပ်သို့မဟုတ် install လုပ်ပါ? http://bit.ly/GPDownload1 ကိုကြည့်ပါ
သို့တိုင်အကူအညီလိုအပ်? ကိုပြဿနာအကြောင်းပိုမိုပြောပြပေးပါ။ http://bit.ly/invalidpackage
Facebook သုံးစွဲသူအသက်အရွယ် 13 ကျော်သာရရှိနိုင်သည်။
mark8 စတိုး 1.07M 457M
APK ဗားရွင္း 196.0.0.0.29
File Size: 72.28MB
Release date: 2018-10-17 17:26:59